हेर्नुहोस बरिस्ठ पत्रकार ऋषि धमलाकि श्रीमतीका केही तस्बिरहरु
सामाजिक सँजाल । हाल एति बेला एलिजा गौतम का केही तस्बिर हरु सामाजिक सन्जाल मा निकै नै भाईरल भएका छन । अनुराग’ डेब्यु नायिका एलिजा गौतम सामाजिक सन्जालमा हट बनेकी छिन् । मौसम चिसो भए पनि उनले सेयर गरेको बिकिनी फोटोले उनको सामाजिक सन्जाल तताएको छ ।
‘बेबी पिन्क’ कलरको बिकिनीमा पोज दिएकी एलिजालाई निकै नै हट देखिएको छ । शुभ दिनको शुभकामना दिदै उनले आफुले जिन्दगीलाई बुझ्न नसकेको पनि बताएकी छिन् । बिकिनीमा सुन्दर देखिएकी चर्चित पत्रकार ॠषि धमला पत्नी एलिजाले लेखेकी छिन । ‘साँच्चै जिन्दगी कसले बुझ्यो ? केही पाउन केही गुमाउनु पर्छ भन्नेले बुझ्यो की !! सबथोक गुमाएर पनि केही नपाउनेले बुझ्यो !! मैले त केही बुझिन ?
नायिका एलिजा यति बेला क्यानडामा छिन् । केही समय अगाडि उनी आफ्नो आमाबुवा भेट्न क्यानडा गएकी हुन् । उनै एलिजाले क्यानडा पुगेर बिकिनी फोटो सेयर गरेर चिसो मौसमलाई तताएकी छिन् । हुन त नायिकाहरुमा बिकिनी मोह कुनै नौलो त पक्कै हैन । गर्मीमा बिकिनी हट नबनेकी एलिजाले जाडो मै भए नि बिकिनी प्रेम देखाएकी छिन् । हेर्नुहोस एलिजा गौतम का केही तस्बिर हरु ।